I-Chamber of Me Mejineli Yokulawula Amabhasi e-IETT | RayHaber | raillynews
IkhayaTURKEYIsifunda saseMarmara34 IstanbulI-Chamber of Mechan Onjiniyela Ukuqondisa Amabhasi we-IETT
14 / 02 / 2020 34 Istanbul, JIKELELE, Highway, Izinhlelo zeThire zeTrime, HEADLINE, Isifunda saseMarmara, Metrobus, TURKEY
I-Chamber yonjiniyela bemishini yokugada amabhasi e-iett
I-IETT isayine isivumelwano nabakwaChamber of Mechanical Enjiniya ngaphakathi kokuhlolwa nokugcinwa kwamabhasi ayo. Ngale ndlela, izimpendulo zale mibuzo zizocwaningwa yisikhungo esizimele ngaphandle kwabahloli be-IETT nezinkampani zosonkontileka zokulungisa. “Ngabe ingxenye efakwe esikhundleni sebhasi ibinephutha ngempela? Impendulo efanele izotholakala ngemibuzo efana nokuthi "Ingabe ucezu lushintshiwe futhi selusha futhi lwangempela?".
Ukusebenzela abagibeli abayizigidi ezi-4 ngosuku, i-IETT yenza imisebenzi yokulungisa nokulungisa emagaraji ayi-3 ngamabhasi ayo ayi-65 11. Njengengxenye yesivumelwano neChamber of Mechanical Enjiniya, kuzobhekwa amabhasi yiqembu leChamber, kanye nabaphathi abaphethe nabaphathi abasebenza ngaphakathi kwe-IETT.
Inhloso yenkontileka ye- "Garage Maintenance and ukulungisa Activitieshlola Umsebenzi" ne-Istanbul Branch yeChamber of Mechanical Engineers ukuhlinzeka kwezimali ezimele zamabhasi e-IETT ngohlelo olubizwa ngeso lesithathu. Ukuthi imisebenzi yokulungisa izimoto nokulungisa eyenziwa egalaji yenziwa ngokuya ngemikhakha efanelekile yobuchwepheshe, izindinganiso zekhwalithi kanye nenqubo enqunywe abaphathi izohlolwa kahle.
UMGOMO WENKONZO UZOBANGELA
Abamele iChamber bazobheka ukusebenza kosonkontileka bezokulungisa, balungiselele imibiko futhi bakhombe izici ezivulekele ukwenza ngcono, futhi baqinisekise ukuthi izinyathelo ezifanele ziyathathwa. Ngakho-ke, ihlose ukunciphisa ukulahleka kwendiza okubangelwa ukwehluleka kwezimoto nokwandisa ukuphepha kwabagibeli. Ukuhlolwa kulindeleke ukuthi kwandise ukwaneliseka kwabagibeli ngokwenza ngcono ikhwalithi yensiza.
I-AUDITI IZOSHENKELWA EZIQONDWINI ZESIBILI
Ukuhlola; ukucwaningwa kobuchwepheshe nokulandelela kuzokwenziwa ngezigaba ezimbili. Ekuhlolweni kobuchwepheshe, kuzobhekwa ukuthi imisebenzi yokulungisa neyokulungisa yenziwa yini ngokuya ngezinqubo zobuchwepheshe. Ekucwaningweni kwemali elandelayo; Kuzobhekwa ukuthi ngabe ukungaphatheki kahle okutholakele ekuhlolweni kobuchwepheshe kuyaqedwa.
Abanjiniyela bamaMechanical bavivinywa iTram Local Silkworm
I-Chamber of Geological Engineers: Umbiko weNkantolo yama-Akhawunti uye wakulungisa ukukhathazeka kwethu
I-Chamber of Engineers uKonya weMengameli wegatsha u-Ali Cinar, wacela ukuvuselela i-tram okwesikhashana
I-Chamber of Mechanical Engineers Sivas Isimemezelo Sifundazwe Sivuliwe
I-Chamber of Mechan Enjiniya iBursa Branch Press Khishwa: iBursa Metropolitan…
I-Chamber of Engineers Engineers Ivakashele i-TCDD (Isithombe segalari)
I-Chamber of Mechanical Engineers
Isitatimende se-Train Accident esivela ku-Chamber of Meteorological Engineers
Ukuvakashelwa kobuchwepheshe besiteshi se-Istanbul kusuka ku-TMMOB Chamber of Environmental Engineers
Umshini we-AKER, Umshini Ukhiqiza (Ividiyo)
Intsha ye-İzmir ichazwe ngamabhasi e-35 Electric eya e-İzmir
Ama-IETT Amabhasi Ahlanganiswe Namaphosta weqembu le-IETT Football
Turkey Rail System Engineers and Ochwepheshe ukugcwalisa!
Imicimbi Yomshuwalense: Izitimela Zezitimela Zezinsimbi ASPECT 2012 - London